November 24, 2021 - Celegroup
ယနေ့မနက် ငါးကြော်လေး စားချင်လာသဖြင့် ဈေးထဲကို ငါးဝယ်ရန် ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော် ဝယ်နေကျ ငါးဆိုင် ရှိသည်။ ငါးကြင်းတမျိုးတည်း ရောင်းပြီး ဖော်ရွေသည်။ ဝယ်သူ အကြိုက် မညည်းမညူ လုပ်ပေးလေ့ ရှိ သည်။ ငါးရောင်းသူကို ငါးစိမ်းသည်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ငါးစိမ်းသည် ဆိုသည်မှာ စွာတာတာ၊ ကက်ကက်လန်၊ မိုက်ရိုင်းသည်ဟု ထင်လျှင် ကျွန်တော် ငါးဝယ်သည့်ဆိုင်မှ မရွှေ ကို ခေါ်ပြချင်ပါသည်။ “ဦးလေး မရောက်တာကြာပြီ၊ […]
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ ဂျပန်လေတပ်က ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်လိုက်ချိန် မှာပေါ့။ အမေရိကန် ရေတပ် အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ စစ်သင်္ဘော ၇ စင်း မြုပ်သွားတယ်။ ၆ စင်းက သုံးလို့ မရတော့ဘူး။ ရေတပ်မှာ ရှိတဲ့ တိုက်လေယာဉ် ၄၅၀ ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ သေဆုံးသူ ၃၈၀၀။ အမေရိကန်တပ်သားတွေ စိတ်ဓာတ် အကျကြီး ကျသွားကြတယ်။ ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာရဲ့ ရေတပ်သားတွေဟာ မျှော်လင့်ချက် မဲ့လောက်အောင်ကို စိတ်ဓာတ်တွေ ကျသွားခဲ့ကြတယ်။ […]
၁။ ပန်း ဘာကြောင့် ကပ်ရသလဲ-? ၂။ ပန်းအိုး ဘယ်နှစ်အိုးထားသင့်သလဲ-? ဖတ်ကြည့်နော်… ၁။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဇေတဝန်ကျောင်း ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်မှာသီတင်းသုံးတော်မူစဉ် ရပ်ဝေး ရပ်နီးမှ ရဟန်း ရှင် လူအများ ဘုရားဖူး တရားနာ လာကြပါတယ်။ ခရီးက ပန်းလမ်းကကြမ်းသောကြောင့် ချွေးသီးချွေးပေါက် အသွယ်သွယ် ဖုန်အလိမ်းလိမ်းနှင့်ပေါ့။ တချို့မှာ…ချွေးနံ့ တထောင်းထောင်းနှင့်ဆိုတော့ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်တစ်ခုလုံး အနံ့သက်တွေကမကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒါကို သတိပြုမိတဲ့ ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာ စသော ရဟန်း […]
ငွေကြေး လှူဒါန်းနိုင်မှ ကုသိုလ်မည်တာမဟုတ်ပါ ၁ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပညာတိုးစေသော စကားပြောပြခြင်း ၂ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကောင်းသော အကြံပေးခြင်း ၃ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ခင်မင်စွာ ပြုံး၍ ဆက်ဆံခြင်း ၄ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကူညီခြင်း ၅ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စိတ်ပျော်အောင် လုပ်ပေးခြင်း ၆ * တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သွန်သင်ဆုံးမ ပေးခြင်း ၇ * […]
ကိုယ့်သားသမီးကို ရိုင်းစေချင်တဲ့ မိဘ ရယ်လို့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ?ကိုယ်ကမိဘ အုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးကို ယဉ်ကျေး လိမ္မာ စေချင်ကြမှာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လောက မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းက လွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက် မဖြစ်လာတဲ့အခါလည်း စိတ်အရမ်းပူမသွားပဲ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လို လေးတွေများ ထိန်းကျောင်းသင်ပြ ပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ ကို ထပ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ 1. ပျော်တတ်အောင်သင်ပေးပါ ဒီအရွယ်ဟာ ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်ကောင်းပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာမှ လောကကြီးရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အ၀မခံစားရင် သိပ်နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ချမ်းသာချင်ရင် ၁။ ငွေနောက်ကိုလိုက်ပါ ဒီနေ့ခေတ်စီးပွားရေးအရဆိုရင် သမရိုးကျနည်းတွေနဲ့ ချမ်းသာဖို့ကခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့ သင့်ဝင်ငွေတိုးလာဖို့အာရုံစိုက်ရပါမယ်။ ငွေတွေထပ်ခါ ထပ်ခါဝင်နေဖို့အာရုံစိုက်နေရမယ်။ခုငွေနောက်ကိုစလိုက်ပါ။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာ ငွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလာပြီး အခွင့်အလမ်းတွေကို မြင်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ မကြွားဝါပါနဲ့။ တိတ်တဆိတ်ကြိုးစားပါ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်း သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေက ဝင်ငွေမပေါသေးဘဲနဲ့တန်ဖိုးကြီးကားတွေ တန်ဖိုးကြီးနာရီတွေဝယ် မဝတ်ပါနဲ့။သင့်အလုပ်ကြောင့် လူသိပါစေ။သင်ဝယ်တဲ့ အရာတွေကြောင့် လူ‌တွေမသိပါစေနဲ့။ ၃။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ငွေစုပါ။ ငွေစုဖို့အတွက်ငွေမစုပါနဲ့ ငွေစုဖို့အတွက်တစ်ခုထဲ‌သော အကြောင်းပြချက်က ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ပါဘဲ။ငွေစုပြီဆိုတာနဲ့စုတဲ့ငွေကို လုံးဝမထိပါနဲ့။ဘာအတွက်မှလည်းမသုံးပါနဲ့။ အရေးပေါ်အတွက်ဆိုရင်တောင် မသုံးပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ […]
မြန့်မာရိုးရာနည်းဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်းတွက်နည်း တွက်နည်း အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။ ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ ထို့နောက် အကြွင်း ၄ ဟောကိန်းအား ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည် ဟောကိန်း ၁ကြွင်း ။ […]
ငွေကိုဘယ်လိုထားမလဲငွေကိုပိုက်ဆံအိတ်အံဆွဲမီးခံသေတ္တာ စသည်မှာထားပါတယ်ဒါပေမဲထားတဲ့နည်းစံနစ်လိုပါတယ်မိမိငွေ အဝင်များဖိုအထွက်နည်းဖိုလာဘ်ကောင်းဖို့လုံခြုံစိတ်ချဖို့ ကံတက်စေဖို့အဝင်ကောင်းသလိုအထွက်လည်းကောင်းသောနည်းနဲ့သာထွက်ဖို့ဖုန်းရွှေဖုန်းရှီပညာကအခုလိုအကြံပြုပါတယ် ၁ ကရဝေးရွက်နဲ့အတူထားပါအကျိုးအနာမပါသောကရဝေးရွက်အနည်းဆုံးတစ်ရွက်နဲ့အတူထားပါငွေပွားများလာစေပါတယ် ၂ အကျိုးအနာမပါတဲ့ဆန်စေ့၂၁စေ့ကိုပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ထုပ်ပြီးငွေနဲ့အတူထားပါလာဘ်ပွင့်လန်းစေတဲ့အပြင်မလိုအပ်ပဲငွေထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ် ၃ ပင်လယ်ဆားအနည်းငယ်ကိုပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ထုပ်ပြီးငွေနဲ့အတူထားပါငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စကြွေးမြှီအမှုအခင်းကိစ္စများကာကွယ်ပေးပါတယ် ၄ ငွေဒင်္ဂါးဖြစ်စေငွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေအတူထားပါငွေကိုကာကွယ်ပေးသလိုလုံခြုံစိတ်ချရစေပါတယ် ၅ ငွေစက္ကူအသစ်တစ်ရွက်အနည်းဆုံးထားပါငွေတန်ဖိုးမြင့်လေကောင်းလေပါ ၆ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာငွေလုံးဝမရှိတဲ့ အဖြစ်မျိုးမပြုမိပါစေနဲ့ငွေကံညံ့သွားတတ်ပါတယ် ၇ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအလွန်စုတ်ပြတ်နေတဲ့ငွေတွေကိုစက္ကူအိတ်နဲ့ဖယ်ထားပါရောမထားပါနဲ့ငွေမရှိတဲ့ဘဏ်ကတ်အဟောင်းများဘောက်ချာအဟောင်းများလိပ်စာကတ်များနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေပါစေနဲလာဘ်တိတ်ပါတယ် ၈ အားလုံးထည့်ထားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးအမှတ်၁မှ၄အထိတစ်မျိုးတော့ငွေနဲ့အတူထားရှိဖို့သင့်ပါတယ် ၉ ဝင်ငွေကောင်းငွေမြဲပြီးလာဘ်လာဘပွားများကြပါစေ၁၀တားရော့ကတ်အနေနဲ့နံပါတ်၁၇The Starကိုအဆောင်အဖြစ်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ် credit ေငြကိုဘယ္လိုထားမလဲေငြကိုပိုက္ဆံအိတ္အံဆြဲမီးခံေသတၱာ စသည္မွာထားပါတယ္ဒါေပမဲထားတဲ့နည္းစံနစ္လိုပါတယ္မိမိေငြ အဝင္မ်ားဖိုအထြက္နည္းဖိုလာဘ္ေကာင္းဖို႔လုံၿခဳံစိတ္ခ်ဖို႔ ကံတက္ေစဖို႔အဝင္ေကာင္းသလိုအထြက္လည္းေကာင္းေသာနည္းနဲ႔သာထြက္ဖို႔ဖုန္းေ႐ႊဖုန္းရွီပညာကအခုလိုအႀကံျပဳပါတယ္ ၁ ကရေဝး႐ြက္နဲ႔အတူထားပါအက်ိဳးအနာမပါေသာကရေဝး႐ြက္အနည္းဆုံးတစ္႐ြက္နဲ႔အတူထားပါေငြပြားမ်ားလာေစပါတယ္ ၂ အက်ိဳးအနာမပါတဲ့ဆန္ေစ့၂၁ေစ့ကိုပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါလာဘ္ပြင့္လန္းေစတဲ့အျပင္မလိုအပ္ပဲေငြထြက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္ ၃ ပင္လယ္ဆားအနည္းငယ္ကိုပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းကိစၥေႂကြးျမႇီအမႈအခင္းကိစၥမ်ားကာကြယ္ေပးပါတယ္ […]
ပါရာစီတမောဆေးနဲ့ တွဲသောက်ရန်မသင့်သော အရာများ
ပါရာစီတမောနဲ့ တွဲသောက်ရန်မသင့်သော အစားအသောက်အချို့ကို အများသိရှိရလေအောင် ထပ်မံမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပါရာစီတမောကို ကိုကာကိုလာ၊ ပက်ပစီ စတဲ့ ဂတ်စ်ပါတဲ့ အရာများနဲ့ အချဉ်ဓါတ်ပါသော အစားအစာများနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါဘူး။ ၂။ ပါရာစီတမောကို ကဖင်းဓါတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်များနဲ့ တွဲပြီး မသောက်သင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သောက်မိလျှင်လည်း တစ်နေ့ကို (၂)လုံးထက် ပိုသောက်မိလျှင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ၃။ ပါရာစီတမောဟာ အရက်၊ ဘီယာ စတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတို့နဲ့လည်း မတည့်ပါဘူး။ ၄။ […]
မသိတတ်တဲ့ မိဘတချို့ရဲ့ သားသမီးတွေဘ၀က တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါ မိဘတိုင်း သားသမီးတိုင်းကို မဆိုလိုဘူးနော် ကောင်းတဲ့မိဘ ရှိသလို ဆိုးတဲ့မိဘလဲ ရှိတယ်။ လိမ္မာတဲ့ သားသမီး ရှိသလို မလိမ္မာတဲ့ သားသမီးလဲ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီး ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ တိုင်းတစ်ပါးထွက်လာပြီး အလုပ်လုပ်နေကြသူအများစုက အသောက်အစား ရှိနေကြပါပေမယ့် လစာထွက်ရင် မိဘတွေကို ဦးဦးဖျားဖျား ပို့ကြတာများပါတယ်။ အသောက်အစား အပျော်အပါး ရှိတတ်ကြပေမယ့် ဘာသာ သာသနာနဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို […]